Aftahannimada dadka oo dhan: ereyada ku hadasha, turuqayaasha iyo daaweeyayaasha hadalka
Baro doodda iyo habaynta hadalka
Ogow muhimadda ay leedahay wada-xiriirka afka oo si fiican u yaqaan
Noqo qof muujin kara, gaar ahaan adigoo baranaya isticmaalka codkaaga iyo aamusnaanta
In la dhaafo oo la is aqbalo aftahanimo mahaddeeda
Inaad aftahan tahay oo leh kala duwanaansho xaddidaya isgaarsiinta waa suurtagal! Soo hel codkarnimada ee xirfadlayaasha codkarnimada, daaweeyayaasha hadalka iyo kuwa turubka.
Ujeedooyinka barbaarineed: Waxaan rabnaa inaan muujino in qof kastaa uu noqon karo xiriiriye wanaagsan haddii uu yaqaanno waxyaabaha aasaasiga ah ee isgaarsiinta, iyo in ka hadalka fagaarayaasha aysan ku xirneyn oo keliya afka laakiin sidoo kale waxay ku xiran tahay kuwa aan hadal ahayn, muujinta iyo nuxurka. Aftahannimadu waa mid la heli karo dhammaan, haddii aad ku dhiirato oo aad diyaar u tahay inaad naftaada ka sarraysiiso, waxayna kuu ogolaanaysaa inaad barato inaad muujiso naftaada si daacad ah oo run ah, wax kasta oo aad ku kala duwan tahay. Kooraskan waxa lagu tusay marag-furka musharrixiintii hore ee tartanka codkarnimo ee turunturoolaha ah, tartanka ay ku jiraan farsamooyinka aftahanimo ee isku dhafan aqbalaadda iyo is-dhaafsiga.
Habka barbaarinta ee iskuxiran: Ku-dhaqanka iyo barashada adoo samaynaya: adoo siinaya farsamooyinka codkarnimada iyo furayaasha hadalka; iyada oo dadka loo keenayo kuwa ku habboon oo la waafajiyo farsamooyinkan si gaar ah iyo faraqa u dhexeeya.
Faham in aftahannimadu ay iyadu iskeed u timaado marka aynu qaadanno kala duwanaanshaheena.
Aftahannimada dadka oo dhan: ereyada ku hadasha, turuqayaasha iyo daaweeyayaasha hadalka Febraayo 11, 2022Tranquillus
READ Heshiiska dib-u-waxbarasho ee shirkadda
horeAasaaska heerka madaniga ah
socdaSharciga Barashada: Hordhac